राम्रो घरपरिवारबाट प्रस्ताव आए नाईँ भन्दिनँः गायिका निरु कार्की| Nepal Pati
राम्रो घरपरिवारबाट प्रस्ताव आए नाईँ भन्दिनँः गायिका निरु कार्की
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जन्मेर काठमाडौँमा संघर्षरत गायिका निरु कार्कीले एक दर्जन गीत बजारमा ल्याइसकेकी छिन् । नेपालीपन झल्कने, सन्देशमुलुक गीतहरूमार्फत चर्चामा आएकी गायिका कार्कीसँग नेपालपाटी डटकमले गरेको कुराकानी ।
तीज आउन लाग्यो, तपाईँको तयारी के छ ?
तीजका लागि नयाँ गीत ल्याउँदैछु । केही दिनमै तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ।
गीत कस्तो खालको छ ?
नेपाली मौलिकता झल्कने खालको गीत रहेको छ । गीत हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला । सवैको मायाको अपेक्षा गरेकी छु ।
तपाई चाहिँ तीज कसरी मनाउनुहुन्छ ?
प्रायःजसो प्रोग्राममै बिजी हुन्छु । यसरी नै मनाउछु भनेर योजना त बनाउँदिन तर पुजापाठ गर्ने र ब्रत बस्ने गर्दछु ।
तीजमा ब्रत बस्नुको कारण चाहिँ के हो ?
तीज महिलाहरूको ठूलो चार्ड हो । आद्य शक्ति भगवानशिवकी अर्धाङ्गीनी हिमालय पुत्री पार्वतीले भगवान शिवको स्वास्थ्य तथा शरीरमा कुनै वाधा उत्पन्न नहोस् भनेर ब्रत बसेकी थिइन, त्यो दिन हरितालिका तिज थियो । त्यसदिनदेखि अहिलेसम्म हिन्दु नारीहरूले यो पर्व मनाउँदै आएका छन् । त्यही मान्यताका आधारमा ब्रत बस्ने गरिन्छ ।
पार्वतीले भगवान शिव पाएजस्तै तपाईले चाहिँ पाउनुभएको छ कि छैन् ?
म एक अविवाहित नारी हुँ । आजको दिनसम्म त्यस्तो कोही पनि भेटिएको छैन् । कुनै दिन भेटियो भने भगवान शिवजस्तै पति भेटियोस् भन्न चाहन्छु ।
पति शिवजस्तै चाहिँ किन ?
ब्रतकथा अनुसार भगवान शिवले भन्नुभएको थियो कि– हे पार्वती ! भाद्रपदको शुक्ल तृतीयामा तिमीले मेरो आराधना गरी जुन ब्रत बसेकी थियौँ, त्यसैको परिणामस्वरूप हामी दुईको विवाह सम्भव भएको हो । यस व्रतलाई विधिविधानपूर्वक जसले लिन्छ, त्यसले तिम्रोजस्तै सुयोग्य र अचल श्रीमान् प्राप्त गर्दछ ।’ त्यसकारण मैले पनि शिवजीजस्तै पति पाउने अपेक्षा गरेकी छु ।
लभका प्रस्तावहरू त आए होलान, तपाईले भनेजस्तै केटाबाट चाहिँ आएको छ कि छैन् ?
प्रस्ताव त नआएका होइनन्, धेरै नै आए । तर, भनेको जस्तो मान्छे भेटेको छैन् । अहिलेको लभ भनेको यति सस्तो भएको छ बजारमा सायद एकले अर्कालाई बुझ्न एकदम गाह्रो छ । आजभोलिका मान्छे यति स्वार्थी हुन्छन कि एकले अर्कालाई विश्वास गर्नै गाह्रो छ ।
भनेपछि तपाई मागी बिहेमा विश्वास गर्नुहुन्छ ?
एकदमै । मागी बिहेबाटै घरपरिवार बलियो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
बिहे कहिले गर्ने सोच छ ?
बिहे गर्न लगन जुर्नुप¥यो । यतिखेरै गर्छु भनेर सोचेकी छैन् । राम्रो घरपरिवारबाट प्रस्ताव आयो भने नाईँ भन्दिनँ । तर, मेरो पेशा (गायन) को कदर हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा सम्पूर्ण नारीहरूलाई तिजको शुभकामना दिन चाहन्छु । मेरो तीजको गीत केही दिनमै आउँदैछ । मेरा पुराना गीतहरूलाई जति माया गर्नुभएको छ, अव आउने गितलाई अझै बढी माया गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु । कमिकमजोरी पनि औल्याइदिनुहोला । राम्रोलाई राम्रो अनि नराम्रोलाई नराम्रो नै भनिदिनुहोला ।
कार्कीको तीज गीत हेर्नुहोस